Natao ho an’ny maty ve ny Filazantsara?
"Tahaka ny nanendrena ny olona ny ho faty indray mandeha, ary rehefa afaka izany, dia hisy fitsarana..." Hebreo 9:27
"Hoy Jesosy taminy: Izaho no fananganana ny maty sy fiainana; izay mino Ahy, na dia maty aza, dia ho velona indray." Jaona 11:25
Misy olona manantena fa hokarakaraina ny fanahiny rehefa maty izy. Misy sasany aza, tsy niraharaha kely akory ny amin’izany fony velona, ka rehefa mahatsapa fa efa ho faty, vao mametraka toromarika momba ny handevenana azy, ary momba ny fotoam-pivavahana mihitsy aza. Mandritra io fotoam-pivavahana io dia rariny tokoa raha ampahatsahivina ireo lohahevitra lehibe mahazatra : momba an’Andriamanitra, momba ny mandrakizay, ny famelan-keloka, ny fahasoavana, ny fiainana mandrakizay. Indrisy anefa fa tsy afaka hanararaotra izany toriteny izany intsony ilay maty.
Ary ireo izay tonga hanotrona azy hatreny am-pasana, nahoana moa izy ireo no hanana fiheverana hafa noho ny an’ilay namany maty, fony izy io mbola velona? Hanao anakampo izy ireo hoe: "Mbola velona isika. Mbola tsy mahakasika antsika ny any ankoatra! Ny Filazantsara dia raharahan’ny maty; hodinihina ihany izany rehefa anjarantsika ny miampita ho any ankoatra; irina mbola ho ela araka izay azo atao izany”.
Aoka anefa tsy hisy hamita-tena: ho diso aoriana loatra, amin’izay. Tsy hanova na inona na inona intsony amin’ny anjaran’ilay maty, na dia lahateny marevaka toy inona aza, atao eo anoloana vatana mangatsiaka. Fahita matetika eo amin’ny filazana manjo ny hoe «Mivavaha ho azy», na «Mivavaha ho an’ny fanahiny». Fitaka izany, satria raha tsy nandray ny famonjen’Andriamanitra sy ny fahasoavany ilay olona, fony fahavelony, dia tsy hisy fotoana hanaovany izany intsony any ankoatra.
Tsy natao ho an’ny maty tsy akory ny Filazantsara, fa ho an’ny velona, izany hoe ho anao. Eny, henoy ny Filazantsara; aminao dia aminao no itenenan’Andriamanitra. “Indro, ankehitriny no andro famonjena” (2 Korintiana 6:2).